Igbo, Romans, Lesson 028 -- We are Justified by Grace and not by the Law (Romans 4:13-18) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 028 (We are Justified by Grace)
B - Ọhuu Nke Niile Site Na Okwesiri Anyi Ka Ego Gaghara Una (Ndi Rom 3:21 - 4:22)
3. Abraham na Devid dịka ọmụmaatụ nke izi-ezi site n'okwukwe (Ndi Rom 4:1-24)
c) Anyi agu n’onye ezi omume site na iwu, o bughi site na iwu (Ndi Rom 4:13-18)
NDI ROM 4:13-18
Ọ bụghị site n'iwu ka Abraham na ụmụ ya nwetara nkwa na ọ ga-abụ onye nketa nke ụwa, kama ọ bụ site na ezi omume nke sitere n'okwukwe. 14 N’ihi na ọ bụrụ na ndị na-ebi n’iwu bụ ndị nketa, okwukwe ya abaghị uru ma nkwa ahụ abaghị uru, 15 n’ihi na iwu na-eweta iwe. Ma ebe iwu nādighi, njehie adighi kwa. 16 N’ebe nke a, nkwa ahụ sitere na okwukwe, ka o wee bụrụ site n’amara wee bụrụ ihe e mesiri nye mkpụrụ-obi Abraham niile - ọbụghị nanị ndị nke iwu, kamakwa ndị ahụ sitere n’okwukwe nke Abraham. Ọ bụ nna anyị niile. 17 Dika edeworo ya si, Emerem ka i buru nna nke ọtutu mba. Ya onwe-ya bu nna-ayi n’anya Chineke, onye o kwenyere - Chineke nke neme ka ndi nwuru anwu di n’onwu ma kpọọ ihe ndi n’emeghi ka odi. 18 N'olile-anya nile, Abraham nwere olile-anya, we kwere, ọ we mua ọtutu mba, dika emere ya, si, Otú a ka nkpuru-gi gādi.
Mgbe o gwasiri ntụkwasị obi ụgha nke ndị Juu nọ na ibi úgwù, Pol bibiri nkwadobe nke abụọ nke ezi echiche ha, nke bụ ntinye ha na Iwu ahụ.
Ndi bi na ozara chere na Chineke nodiri n’elu tebulu nile nke ogbugba ndu ahu, nke o mere ka ekpughere ya onwe ya, ma buru eze nke uwa. Ha nwere olile-anya na Chineke ga-anọnyere ha ma ọ bụrụhaala na ha debere Iwu ahụ ọtụtụ iwu-nsọ ya. Kaosinadị, ha amataghị ajọ mmehie ha, ma ọ bụ ha enwetaghị mmetụta dị ukwuu nke Chineke n'ebe mmadụ niile nọ. Ha ghọrọ ndị ohu nke Iwu ahụ. Obi ha ghọrọ nkume, ha wee nya isi. Ha ahughi iwe nke Chineke n’arụ ha, ma ọ bụ mara Kraist Onye bi n’etiti ha.
Ahụhụ ga-adịrị ụlọ ụka, ma ọ bụ obodo, nke siri ike na -echebe omenala, machibido, na ikpe, karịa okwukwe dị mfe na Kraịst dị ndụ! Onye na-esighi ike n’okwukwe di nma kari onye ọka iwu na-adighi n’anya. Ọ bụ nnukwu ihe omimi na iwu na-eweta iwe, na-akpali mmebi iwu, ma na-eweta ntaramahụhụ. Ọ bụ ya mere ndị nkuzi ji dị nkọ na-etinye naanị okwu ole na ole na ụlọ na ụlọ akwụkwọ ha, n'ihi na Kraịst edowo anyị nsọ n'ịhụnanya, ntụkwasị obi, ndidi na mgbaghara, ọ bụghị ịbụ ohu nke iwu na ụkpụrụ, nkọwa ha siri ike, yana ntaramahụhụ ha tara akpụ.
Pol gosikwara ndị ọka iwu, ọzọ, na e zitere Abraham n’onye ezi omume site n'okwukwe, ogologo oge tupu Moses abịa n’iwu ahụ. Ya mere, Abraham tukwasiri Chineke obi tupu enye iwu a. Iwu ndị ahụ mechara bịa duzie ndị kwere ekwe, ma mebie mpako ha. Okwukwe na obi ebere Chineke bụ ike dị mma, nke na-ewulite ndụ mmụọ, na-agba onye kwere ekwe ume ijere Chineke ozi, ma na-akpali ya ịrụ ezi ọrụ; ebe iwu tiri mkpu, maa anyị ikpe, taa anyị ahụhụ ma gbuo anyị.
Mgbe ah, Abraham legidere omume ya, na nlele ya nke iwu, kama o lekwasiri anya na nkwa Chineke, ma tukwasie obi ya ike. Ọ ghọrọ onye nlereanya na nna ime mmụọ nye ndị niile kwere ekwe. Ebe obu na ekwere nkwa na ya bu na agam agozi mba nile, n’agbanyeghi n’enweghi nwa, Abraham nwetara otutu mba na ndi mmadu site n’okwukwe ya nke mere Pol kpọrọ ya “onye nketa nke uwa”.
N’ime otua, Mụọ Nsọ bidoro n’ime Abraham, onye dị mfe nghọta, atụmatụ nke ngọzi nke Kraịst n’onwe ya bi n’ime ya, na-adọtara ya ndị ezi omume niile site n’okwukwe.
Eleghi anya Abraham kariri otutu ihe nke agba ochie n'ihi oke okwukwe ya. Chineke kwere nkwa na nkpuru ya g’agọzi ndi nile nke uwa, nke putara site na nkpuru ya, Kraist n’onwe ya. Ejiri okwu Hibru a bụ “mkpụrụ” na-egosi mmadụ, onyeozi ahụ gosikwara na e nwere okwu pụrụ iche banyere Kraịst na nkwa ekwere Abraham. Ya mere, ndi agu ha n’onye ezi omume g’eji elu-igwe ya nile kerita elu-igwe nihi na ntụkwasị obi ha n’ime Kraist ejikọwo ha na ndu, ike, na ngozi nke Chineke.
Bịakwute Onye nzọpụta ka i wee si n’ọnwụ gị bilie. Ọ bụrụ n’ịnọ n’okwu ya, Mmụọ Nsọ ga-eme ka e nwee ndụ ọhụụ n’ime gị na gburugburu gị. Y’oburu enwe okwukwe na nkwa nke Chineke n’ime uka ma obu obodo, okwukwe a gha merie onwu n’ime mmehie, ma guzosie ihe ohuru nke ahutaghi na mbu, n’ihi na Chineke n’edeputa ma n’esite n’okwukwe gi, o wee nu mkpu nke ntụkwasị obi gi. Inabata gị okwu ya gbanwere gị ụwa.
EKPERE: Nna nke elu-igwe, obi anyi di nkenke, ma tugide ya iwu, ma nwee ike kpee ndi ozo ikpe ma maa ya ikpe. Nye ohere maka ntụkwasị obi zuru oke na okwukwe zuru oke n'ime obi anyị, ma kwe ka mmụọ nsọ gị doo anyị n'anya, nwe obi ike na ntughari, ka ndị nwụrụ na mmehie ghara ibili, ka otuto gị wee jupụta na mba anyị. Mepụta okwukwe gị n’ebe anyị nọ ka ị nwee ike rụọ ọrụ nzọpụta gị site na anyị.
Gini mere any we ji enweta ng ozi nke Chineke site n'okwukwe any in kwere na nkwa Chineke, obughi site na idebe Iwu?
Page last modified on January 26, 2021, at 02:56 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)